‘डाक्टरलाई दुई घण्टा पर्खिन तयार हुने तर औषधि लिन दुई मिनेट पनि हतार ?’ - onlinekarnali.com
– प्रदीप लम्साल, बरिष्ठ फार्मासिस्ट : हेल्पिङ हेन्ड्स फार्मेसी चावहिल
फार्मेसीबाट औषधि लिँदा के – के कुरामा ध्यान दिने ?
फार्मेसीबाट औषधि खरीद गर्दा मुख्य रुपमा तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
डाक्टरले लेखे अनुसार दिएको औषधि ठिक छ कि छैन ?औषधिको म्याद ठिक छ कि छैन र दिने मान्छे ठिक छ कि छैन ।
हिजो आज देखिएका र सुनिएका समस्याहरु यहि तीन कुरामा हुन् ।
पढेको व्यक्तिले त सहि औषधि दियो भनेर छुट्याउला नपढेकाले कसरी चिन्ने ? अर्को कुरा फार्मासिस्ट सहि छ भनेर कसरी चिन्ने ? विरामीले औषधि किन्न थाल्ने कि फार्मासिस्ट चिन्न थाल्ने ?
ठिक भन्नु भयो । यो प्रश्न जति सजिलै भनियो उत्तर दिन निकै जटिल छ । तपाईँले भने जस्तै नपढेकालाई औषधि चिन्न गाह्रो छ ।
फार्मासिस्ट सहि कि गलत भन्ने त परको कुरा । त्यसैले जहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हो । उपचार गरेको हो ।
त्यहिबाट औषधि लिनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । किनकी अस्पतालकै फार्मेसीमा बस्नेहरु जिम्मेबार हुन्छन् ।
औषधि किन्दा अरु के – के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
औषधि लिइसकेपछि तपाँईलाई फार्मासिस्टले खाने तरिका सिकाउनुपर्छ । र तपाईँले राम्ररी सुन्नुपर्छ । दिनमा कतिपटक खाने ? कति मात्रामा खाने ? कतिवेला खाने ? खाना खाएर खाने कि खालीपेटमा खाने आदि आदि । यो कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।
खाली पेटमा खान भनेको छ भने खाना खाएर खाँदा के हुन्छ भनेर पनि सोध्नुहोस । एक दिन खान विर्सिए भने के हुन्छ भनेर पनि सोध्नुहोस ।
कहिले काही एक डोज विर्सेको भनेर अर्को डोज डव्वल खाने पनि गरेको सुनिन्छ । यस्तो गर्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि सोध्नुहोस ।
त्यसैकारण पनि सोध्नु जरुरी छ । एक भन्दा बढी औषधि छ भने कति बेरको अन्तरमा ती औषधि खाने ? त्यो कुरा पनि सोध्नुपर्छ । दिनमा कति घण्टाको औषधि खानु भनेको छ त्यो पनि ख्याल गर्ने । सकेसम्म भनेकै समयमा खानु राम्रो हुन्छ ।
घरमा औषधिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कस्तो ठाँउमा राख्ने ?
घरमा गएपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको औषधि बच्चाले नभेटने ठाँउमा राख्ने । सामान्य त औषधिहरु घाम र ओसबाट जोगाउनुपर्छ । अर्थात ठिक्क ठाँउमा राख्नुपर्छ । कतिपय औषधिहरु कोलचेन मेन्टेन गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् । त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै मधुमेहका विरामीले लगाउने इन्सुलिनहरुलाई कोल चेन मेन्टेन गर्नुपर्छ ।
सिसि भित्र भएको झोल औषधिको विर्को खोलेपछि कति दिनसम्म रहन्छ ?
सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो । धेरैजसोले के गर्छन भने एक पटक बच्चालाई खुवाएको सिटामोलको झोल औषधि निको भएपछि बन्द गर्ने र चार महिना पछि ज्वरो आयो भने त्यहि खुवाईदिने । तर त्यस्तो गर्नुहुँदैन एकपटक खोलेपछि सकेसम्म सात दिन भित्र सक्नुराम्रो हुन्छ । म्याद रहेपनि एक पटक प्रयोग गरेको औषधि फेरी लामो समयसम्म राख्न सकिदैन । मल्हमहरुको कुरा पनि त्यहि हो ।
अचेल फार्मासिस्टहरुले विरामीलाई औषधि दिदा फरक परेको ? म्याद गुज्रेको आदि कुराहरु पनि उठने गरेका छन् नि ?
यसमा दुबैपक्षको कमजोरी देख्छु म । हामी डाक्टरलाई एक घण्टा कुर्न तयार हुन्छौँ । रगत दिनलाई दुई घण्टा कुर्न तयार छौँ । एक्सरे गर्न एक घण्टा कुर्न तयार छौँ तर सबैभन्दा सेन्सेटिभ चिज औषधि लिन दुई मिनेट पर्खन सक्दैनौँ । पहिला टयाक्सी बोलाउछौँ र औषधि किन्छौँ ।
सबैभन्दा हानीकारक भनौ वा कमजोरी त्यहिनिर छ । हतार हतारमा फार्मासिस्टले पनि औषधि दिनुपर्छ । राम्ररी काउन्सिलिङ गर्न पनि भ्याउदैन ।
अर्को फार्मासिस्टलाई डाक्टरहरुको अक्षरले पनि समस्या पार्छ । सांकेतिक जस्तो देखिने अक्षरले कहिलेकाही औषधि फरक पर्न जान्छ । त्यसैले डाक्टरी अक्षर भन्ने मान्यतालाई सच्याएर प्रष्ट बुझिने डाक्टरका अक्षर बनाउनुपर्छ । फार्मासिस्टहरुलाई सजिलोसंग बुझ्ने अक्षर लेखे ढुक्क हुन्छ ।
← नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना र चुनौती
जनकपुरमा फागुनदेखि रेल चल्ने, कागजमा तयार छ रेल सञ्जालको जालो →